May 3, 2019 - MM Live News
သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင် မမေ့ထားသင့်တဲ့ အချက်တွေေ—
May 3, 2019 MM Live
သင့်အနေနဲ့ အခုချိန် ကြင်စဦး အိမ်ထောင်ရှင်ဘဝကို တည်ထောင်ထားသူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေရတု၊ ရွှေရတု ပေါင်းများစွာ အိမ်ထောင်သက် ကြာညောင်းနေသူပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်အနေနဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးခိုင်မြဲပြီး ချစ်ခင်ကြင်နာမှု အပြည့်နဲ့ သစ္စာတရားပြည့်ဝနေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုသာ လိုချင်ကြမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလို အိမ်ထောင်တစ်ခုလည်း ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်၊ ဒီလို ဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်း ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်ရမှန်း မသိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Hellosayarwon မှ ခိုင်မာတဲ့ Relationship တစ်ခု တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် မမေ့သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ပေးပါ။ Relationship ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံတွေအားလုံးက တကယ့် အစစ်အမှန် နားထောင်ခြင်းဟာ ရန်ဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အပြင် ယုံကြည်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှု ပြည့်ဝတဲ့ Realtionship […]
အိပ်ချိန် နောက်ကျခြင်း၏ ဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ—
အိပ်ချိန် နောက်ကျခြင်း၏ ဆိုးရွားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အိပ်ရာဝင် နောက်ကျခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု တွေကို ဖြစ်စေတတ် ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြသနာတွေဖြစ်ပေါ်စေရုံမျှ မကဘဲ သင့်ရဲ့နေစဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလည်း ထိခိုက်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို မြင့်တက် စေပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကိုပါ ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေ ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု စိတ်ဖိစီးမှု လက္ခဏာတွေဟာ နေ့စဉ်အိပ်စက်တဲ့ အချိန်ပမာဏပေါ်မှာ ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်။ အိပ်စက်ချိန် သင့်တင့်လျောက်ပတ်မှု မရှိခြင်းဟာ စိတ်ကျခြင်း၊စိတ်ဂယောင်ချောက်ချား ဖြစ်ခြင်းနဲ့ သတိမေ့တတ်ခြင်း စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ တတ်ပါတယ်။ နောက်ကျမှ အိပ်တတ်သူတွေဟာ အိပ်ဆေးတွေကိုမှီဝဲနေရပြီး ဒီဆေးဝါးတွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ထပ်မံမြင့်တက်စေပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း […]
ရေခဲရေ အကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့(၆)နှစ်က ရေးဖူးတဲ့ဆောင်းပါးလေး..တိုက်ဆိုင်လို့ပြန်တင်ပြပါတယ်.. ရေခဲရေ(သို့) အဆိပ်သောက်နေကြသူများ လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းက မန္တလေးမြို့ ကျုံးနံဘေးတွင် ညနေဖက် အပြေးလေ့ကျင့်နေသူ တစ်ဦးကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာ ပန်းဝင်လာချိန်တွင် ရေခဲစိမ် ရေသန့်ဘူး ပေးလိုက်ရာ တစ်ရှိန်ထိုး မော့ချလိုက်ပြီးနောက် သတိလစ်လဲကျပြီး ပါးစပ်မှ အမြှုပ်များ ထွက်လာသဖြင့် ပြင်ပ ဆေးရုံတစ်ခုသို့ ပို့လိုက်ရသည်ဟု သိရပါသည်။ ရေခဲရေ(သို့) အဆိပ်သောက်နေကြသူများ.. 1 နေပူထဲမှ ပြန်လာပြီး အိမ်ရောက်သည်နှင့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ရေအေးအေး တစ်ပုလင်း ထုတ်ယူပြီး အားရပါးရ သောက်ချလေ့ရှိသူ တစ်ဦးသည် လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းက မျက်စိများ နီရဲလာပြီး ခေါင်းကိုက်လာသဖြင့် ပြင်ပ ဆေးခန်းတစ်ခုတွင် သွေးချိန်ကြည့်ရာ အပေါ်သွေး 200 mm Hg တက်နေသဖြင့် […]
ကောလင်း မေ ၃ လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှဇနီးနှင့်သမီးအားဓါးဖြင့်ခုတ်သတ် ကောလင်းမြို့နယ်၊မြင့်ဒူးရွာတွင်ယနေ့နေ့လည်(၂)နာရီအချိန်ကလင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှဇနီးနှင့်သမီးအားဓါးဖြင့်ခုတ်သတ်မှု့ဖြစ်ပွားသည်။ မြင့်ဒူးရွာနေ မင်းမင်းအောင်နှင့်ခင်ထက်ထက်လှိုင်တို့သည်လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်ရာမှယောင်္ကျားဖြစ်သူမင်းမင်းအောင်မှ၎င်း၏ဇနီးခင်ထက်လှိုင်နှင့်(၇)လအရွယ်သမီးဖြစ်သူဇင်ရတီမိုးမြင့်တို့အား…. ဓါးဖြင့်ခုတ်ရာလည်ပင်းပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ရင်ညွှန့်ထိုးသွင်းဒါဏ်ရာများဖြင့်နေရတွင်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသည်ဟုသိရသည်။တရားခံအားအချိန်တိုအတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးကောလင်းမြို့မစခန်းမှဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ထားကြောင်းသိရသည်။ Kawlin Newslay unicode ကောလငျး မေ ၃ လငျမယားခငျြးရနျဖွဈရာမှဇနီးနှငျ့သမီးအားဓါးဖွငျ့ခုတျသတျ ကောလငျးမွို့နယျ၊မွငျ့ဒူးရှာတှငျယနနေ့လေ့ညျ(၂)နာရီအခြိနျကလငျမယားခငျြးရနျဖွဈရာမှဇနီးနှငျ့သမီးအားဓါးဖွငျ့ခုတျသတျမှု့ဖွဈပှားသညျ။ မွငျ့ဒူးရှာနေ မငျးမငျးအောငျနှငျ့ခငျထကျထကျလှိုငျတို့သညျလငျမယားခငျြးရနျဖွဈရာမှယောကငြ်ျားဖွဈသူမငျးမငျးအောငျမှ၎ငျး၏ဇနီးခငျထကျလှိုငျနှငျ့(၇)လအရှယျသမီးဖွဈသူဇငျရတီမိုးမွငျ့တို့အား…. ဓါးဖွငျ့ခုတျရာလညျပငျးပွတျရှဒဏျရာ၊ရငျညှနျ့ထိုးသှငျးဒါဏျရာမြားဖွငျ့နရေတှငျပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးသညျဟုသိရသညျ။တရားခံအားအခြိနျတိုအတှငျးဖမျးဆီးရမိပွီးကောလငျးမွို့မစခနျးမှဥပဒအေရအရေးယူဆောငျထားကွောငျးသိရသညျ။ Kawlin Newslay
ဆိုင်ကယ်ကို တစ်နာရီ ၂၆၄ ကီလိုမီတာအထိ အမြန်မောင်းပြခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ရုပ်သံအွန်လိုင်းမှာ နံမည်ကြီးနေ…..
April 30,2019 ထိုင်းနိုင်ငံ ဖက်ချပူး ခရိုင်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ ဘစ်ဘိုက် (Big bike) ဆိုင်ကယ်ကို တစ်နာရီ ၂၆၄ ကီလိုမီတာအထိ အမြန်မောင်းပြခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ရုပ်သံအွန်လိုင်းမှာ နံမည်ကြီးနေပါတယ်။ ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ဖက်ချပူ ခရိုင်ကား လမ်းမကြီးပေါ်မှာ YZF-R1M Big bike ဈေးကြီး (ဘတ်ငွေ (၁) သန်းကျော်အထိ ဈေးပေါက်) ဆိုင်ကယ်ကြီးကို …. အမြန်နုန်း တစ်နာရီ ၂၆၀ကီလိုမီတာ ကျော်အထိ မောင်းကြည့်ရင်း အရှိန်လျှော့ တဲ့အခါ လမ်းဘေးက မီးတိုင်နဲ့ဝင်တိုက်ပြီး နေရာမှာတင် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ထိုင်းလူငယ် အသက် (၂၄)နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သေဆုံးမှု […]
ဦးစောနိင်(ရှမ်းပြည်)(ခ) ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာ အပေါ် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ ဥပက္ခာပြုတဲ့လုပ်ရပ်….
သို့/ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သိစေရန် “ဦးစောနိင်(ရှမ်းပြည်)ဟာ တစ်ကောင်ကြွက်မဟုတ်ပါ” ဈာပနကိစ္စတွေနဲ့လူမှုရေးအရ ရင်ထဲမှာ မျိုသိပ်ထားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ပြောခွင့်ပြုပါတော့ခင်ဗျာ။တစ်ချိန်တစ်ခါက အနူပညာကို စွဲလန်းရူးသွပ်စွာမြတ်နိူးလွန်းလို့ မိသားစုကိုတောင် စွန့်ခွါပြီး အနူပညာလောကထဲရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး ဦးစောနိင်(ရှမ်းပြည်)။ သူပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပေါင်း(500)ကျော်ကို ခုချိန်ထိ မြတ်မြတ်နိုးနိူးသိမ်းဆည်းထားပြီး မပျံလွန်ခင်အချိန်အထိ အနူပညာသည်တွေအကြောင်းများပြောနေရရင် ပြုံးရွှင်ကြည်နူးနေတတ်တဲ့ မင်းသားကြီး ဦးစောနိင်(ရှမ်းပြည်)တဖြစ်လဲ ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာဟာ နယ်မြို့ လေးတစ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး တောင်ငူခရိုင် အုတ်တွင်းမြို့  ဈေးကျောင်းတိုက် မှာ (26.4.19) နေ့ ည(8:30)အချိန်မှာ ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့တယ်။ ဦးစောနိင် (ရှမ်းပြည်) ဟာ အုတ်တွင်းမြို့ ဈေးကျောင်းတိုက်ရဲ့ တိုက်အုပ်ဆရာတော်၊ ရင်ခုန်သံ ရှင်ရေးကူညီမှုအသင်းကြီး၏ နာယကဆရာတော် တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဦးတေဇသီရိ ရဲ […]
တောင်ကြီးလေးလောင်းပြိုင်သတ်ခဲ့ သောတရားခံကို စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ချက် ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စံချိန်တင်…..ြ
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၏လေးလောင်းပြိုင် သတ်ခဲ့ သောတရားခံကို စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ချက် စံချိန်တင်ပြီ။ တောင်ကြီး မေ၃ ပြီးခဲ့ တဲ့ ဧပြီးလ ၂၈ ရက်နေ့တောင်ကြီးမြို့ မြင်းဖြူ (၂ )ကောင်တိုင်းရင်းဆေးတိုက် နေအိမ်တွင် လေးလောင်းပြိုင်သတ်ခဲ့ သော လူသတ်တရားခံနှင့် ငွေသား လက်ဝတ်ရတနာ ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ….. အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်မှု့ အပေါ် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ရေငုံနုတ်ပိုက်ရလောက်အောင် စံချိန်တင်လောက်တယ်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ မနေ့ က ဆက်လက်ပြီး စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ခဲ့ ရာ လူတွေကိုသတ် ငွေနှင့့်ဲ့ရွှေထည်ပစ္စည်း တွေယူသွားခဲ့ပေမဲ့ မနေ့က စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ချက်အရ ရွှေချောင်းတွေကိုပါ ဆက်လက်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ […]
အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိဿ ကမ်းခြေ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖန်နီတိုက်ခိုက်ပြီး မြင်ကွင်း…..
ဆိုင်ကလုန်း ဖန်နီ ကုန်းတွင်းဝင်ရောက်မှုကြောင့် လူနှစ်ဦး သေဆုံးကြောင်း သိရ ပူရီ၊ မေ ၃ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖန်နီသည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခန့်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိဿ ကမ်းခြေ ကုန်းတွင်းသို့ ပုူရီမြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ သေဆုံးသူ ၂ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ ”လက်ရှိအချိန်အထိ နှစ်ဦးသေဆုံးတယ်လို့ ကျွန်တော် အတည်ပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကတော့ ရှဲလ်တာထဲမှာနေနေတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက်ပါ။သူက နှလုံးရောဂါကြောင့်သေဆုံးတာပါ။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ သတိပေးထားတဲ့ကြားက အပြင်ကိုထွက်လို့ သစ်ပင်ပိပြီးသေဆုံးရတာပါ”ဟု သြရိဿပြည်နယ် အထူးပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bishnupada Sethiက AFP သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။ ဆိုင်ကလုန်းဖန်နီတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ပင်လဲပြိုမှုများ၊ အဆောက်အအုံပျက်စိးမှုများရှိပြီး၊ လက်ရှိအချိန်တွင် လျှစ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်မှုများကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။ သို့ရာတွင် […]
အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Odisha ပြည်နယ်ဆီကို တိုက်ခတ်နေတဲ့ မုန်တိုင်း Fani တိုက်ရိုက် သတင်းပေးပို့ ချက်….
အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Odisha ပြည်နယ်ဆီကို တိုက်ခတ်နေတဲ့ မုန်တိုင်းFani တိုက်ရိုက် သတင်းပို့ ချက်။ May3,2019 အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေဟာ အရှေ့ဖက်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတလွှား မြေနိမ့်ရာ နေရာတွေမှာ နေထိုင်သူ ၁.၂ သန်းကျော်ကို ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာနေ့ အစောပိုင်းမှာ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဝင်ရောက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ မုန်တိုင်း မကျရောက်ခင်မှာ နောက်ထပ် ထောင်နဲ့ချီရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်။ Odisha ပြည်နယ် ကယ်ဆယ်ကူညီရေး ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Bishnupada Sethi ကတော့ ဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ အဆင့်အားလုံးကို အပြင်းအထန်ဆုံး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာတော့ မုန်တိုင်းဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာ တနာရီကို ၁၅၅ မိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ တိုက်ခတ်နေပြီး တခါတရံမှာ တနာရီကို မိုင် ၁၉၀ လောက်အထိ […]
ဖာနီမုန်တိုင်းအိန္ဒိယမှာ မွှေနေတဲ့ ( ရုပ် သံ )…..
အလွန်အလွန်အားကောင်းသောဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖာနီ(Fani)သည် မေလ ၃ ရက်နံနက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသပြည်နယ်ကမ်းခြေ ပူရီ (Puri)မြို့အနီးမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ လူတစ်သန်းကျော်အားလုံခြုံစိတ်ချဘေးကင်းရာနေရာများသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ဒေသအတွင်းရထားလမ်း၊ကားလမ်းနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်မှုများရပ်ဆိုင်းထားရပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝဘေးကယ်ဆယ်ရေးအသင်းများကိုအသင့်ပြင်ထားကြောင်းသိရသည်။ ဖာနီမုန်တိုင်းကကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ချိန်တွင် တစ်နာရီလျှင်လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော်နှုန်းရှိကြောင်းသိရသည်။မုန်တိုင်း စက်ကွင်းအတွင်းသြရိသပြည်နယ်ရှိကျေးရွာ ၁၀,၀၀၀ ခန့်နှင့်မြို့ ၅၂ မြို့တို့ကျရောက်နေကြောင်းသိရသည်။ Ref——Times of India unicode အလှနျအလှနျအားကောငျးသောဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး ဖာနီ(Fani)သညျ မလေ ၃ ရကျနံနကျတှငျ အိန်ဒိယနိုငျငံ သွရိသပွညျနယျကမျးခွေ ပူရီ (Puri)မွို့အနီးမှဖွတျကြျောဝငျရောကျခဲ့ရာ လူတဈသနျးကြျောအားလုံခွုံစိတျခဘြေးကငျးရာနရောမြားသို့ရှပွေ့ောငျးပေးခဲ့ရကွောငျးသိရသညျ။ ဒသေအတှငျးရထားလမျး၊ကားလမျးနှငျ့လကွေောငျးပို့ဆောငျမှုမြားရပျဆိုငျးထားရပွီးဆေးဘကျဆိုငျရာနှငျ့သဘာဝဘေးကယျဆယျရေးအသငျးမြားကိုအသငျ့ပွငျထားကွောငျးသိရသညျ။ ဖာနီမုနျတိုငျးကကမျးခွကေိုဖွတျကြျောခြိနျတှငျ တဈနာရီလြှငျလတေိုကျနှုနျး ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကြျောနှုနျးရှိကွောငျးသိရသညျ။မုနျတိုငျး စကျကှငျးအတှငျးသွရိသပွညျနယျရှိကြေးရှာ ၁၀,၀၀၀ ခနျ့နှငျ့မွို့ ၅၂ မွို့တို့ကရြောကျနကွေောငျးသိရသညျ။ Ref——Times of India